Kyrghyzistan, Toeram-Pilaminana ho an’ny Mpanangom-baovao ao Azia Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Kyrghyzistan, Toeram-Pilaminana ho an'ny Mpanangom-baovao ao Azia Afovoany
Nandika (fr) i Pierrik Berthier
Voadika ny 03 Marsa 2017 3:54 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, Français, 简体中文, 繁體中文, English
Sarintany ara-politikan'i Azia afovoany. Lisansa Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Nivoaka voalohany tao amin'ny EurasiaNet.org mpiara-miombon'antoka aminay ity lahatsoratra ity. Nosoratan'i Zukhra Iakupbaeva, izay manoratra ho an'ny Global Voices ihany koa ary nahazoana alalana ny famoahana azy eto.
Azo lazaina ho toerana azo antoka ihany i Kyrgyzistan ao anatin'ny faritra iray manahirana ho an'ny mpanao gazety. Efa taona maro izao no nanori-ponenana tao ireo mpanao gazety maromaro avy amin'ny faritra hafa ao Azia Afovoany, noho ny filaminana sy ny fivoaran'asa ary matetika noho ny antony manokana.
Mampivandravandra izao toe-javatra izao ny filaharana manerantany nalahatry ny Reporters sans frontières tamin'ny taona 2016 : Tsy faritra tsara andalovana i Azia Afovoany eo amin'ny lafiny fivezivezen'ny vaovao malalaka sy ny famoaham-baovao mahaleotena. Mitokozihitra any amin'ny laharana faramparany mifanila amin'i Korea Avaratra sy i Ethiopia ny firenena tahaka an'i Tiorkmenistan sy Ozbekistan. Ankoatra izay, miaritra fangejana hatry ny ela ireo famoaham-baovao ao Tadjikistan, ary nitombo ny famoretana hatramin'ny farany taona 2015 izay niteraka fandosiran'ny mpanangom-baovao.
Azo andravahana ny nametrahan'i Bishkek, renivohitry ny firenena, ny tenany ho tanàna fitodian'ireo mpitady fahalalahana ara-pamoronana sy ara-pahalalàna ny tantaran'ireo mpanao mpanangom-baovao telo avy amin'ny vazantany efatr'i Azia afovoany manaraka etoana.
Ho an'i Diana Rakhmanova, 27 taona ary mpanangom-baovao avy ao Tadjikistan, nanova tanteraka ny fijeriny ny fanangonam-baovao ny fandalovana tao Kyrgyzistan tamin'ny taona 2010, raha nanaraka ny fanofanana naharitra telo volana nataon'ny fampielezam-baovao iraisampirenena alemà Deutsche Welle tao izy.
“Ny tena nahatalanjona ahy nandritra ny fonenako vetivety tao Bishkek dia ny nihaonako tamin'olona tsotra tsara taiza liana politika ary avelan'ny manampahefana ara-panjakana maka vaovao malalaka ry zareo. Tsy matahotra mpanao gazety ny manampahefana ambony ao, ary ahitana fahavitrihana ny fampiasana ny tambajotra sosialy ao” hoy i Rakhmanova tamin'ny EurasiaNet.org raha niara-nisotro kafe tamin'ny iray amin'ireo toeram-pisotroana maro hita ao Bishkek ry zareo.
Vintana ny nihaonan'i Rakhmanova tamin'ny mpanangom-baovao iray tao an-toerana izay nanolo-kevitra azy hiasa tao Bishkek, izay nataony tokoa rehefa nahavita fiofanana nandritra ny herintaona izy. Nanazava izy fa tsy mora mihitsy ny nizatra ny toerana : “tsy nety nahatadidy ny anaram-pianakaviana kyrghyz mihitsy aho ary tsy nisy na inona na inona fantatro momba ireo vondrona parlemantera nisy.”
Nanampy azy hahalala ireo singa manavaka ny fiteny ao ny nitaizana azy tao amin'ny fianakaviana tatar. “Azoko izay lazaina raha manontany amin'ny teny rosiana aho ka valiana amin'ny teny kyrghyz. Satria haiko tsara ny teny tatar, izay iresahako amin'ny fianakaviako any Tadjikistan.”
Miteraka olana ara-taratasy matetika ny fifanenjanana misy ao amin'ny faritra. Mitantara izy fa indray andro, “tsy navela hiditra tao Kyrghyzistan avy ao Kazakhstan aho noho ny fifampitifirana noho ny adin-tsisintany nifanaovan'i Kyrghyzistan sy i Tadjikistan.” Nampiany fa : “mizaka ny zom-pirenena rosiana ihany koa aho, ary tamin'io indray mitoraka io dia ny fananako pasipaoro rosiana no nahafahako niampita ny sisintany.”
Tsy manam-pikasana ny hody any Tadjikistan i Rakhmanova.
“Tsy te-hody any Tadjikistan aho satria tsy afaka hizatra tsy fisiam-pahalalaham-pitenenana” hoy ny fanazavany. “Ary manana ankohonana aho aty, vady iray sy zanakalahy iray herintaona.”
Ho an'ny mpanangom-baovao hafa, ny fifandraisana ara-pianakaviana sy ara-pifandraisana no ambony noho ny firosoana arakasa.
Nilaza i Elyor Nematov, 28 taona, mpanangom-baovao mpaka sary, avy ao an-tanànan'i Bukhara ao Ozbekistan, fa gaga ny namany raha nifindra tao Bishkek, renivohitr'i Kyrghyzistan izy. Nohazavainy fa te-hifanakaiky tamin'ny fofombadiny nonina tao Bishkek izy, ary taty aoriana izy vao nanararaotra ny fanatsarana ny fahalalàny amin'ny fakana sary fanaovana fanadihadiana.
Tsy ny asany no nametraka olana ho an'i Nematov tany Ozbekistan, fa ny finoany baha'i.
Mitantara izy : “fony aho mpianatra, miahiahy ahy ho mpitrifana ny polisy noho izaho baha'i. Notazonina 15 andro aho tao Tachkent, noho ny filazana fa nanohitra ny fisamboran'izy ireo ahy nandritra ny bemidina manokana nataon'ny polisy hiadiana amin'ny eksitiremisma. Ny marina anefa dia naka am-bavany ahy ry zareo, ka nangataka ny hampisehoan-dry zareo ny karany aho sy hanazava amiko ny antony hisamborany ahy.”
Tsy dia raharahian'i Nematov loatra izay toerana onenany. “Tsy miraharaha sisintany aho ; monina ao Kyrghyzistan aho fa mahasahana an'i Azia Afovoany iray manontolo ny tatitra ataoko”, hoy ny filazany.
Tsy manam-pikasana ny handao an'i Kyrgyzistan tahaka an'i Rakhmanova ihany koa i Nematov. Ny nofinofiny amin'izao fotoana aza dia ny hametraka foibem-pakana sary fanadihadiana ao Bishkek hanampiany ireo mitovy asa aminy manerana an'i Azia Afovoany.
Tiorkmenistan no firenena ao Azia Afovoany tsimifaditrovana indrindra manoloana ny mpanangom-baovao sy mpikaroka manana fisainana tsy-miankina. Henjana dia henjana ny miandry ireo vitsy dia vitsy mbola mahasahy mijoro ho mpanangom-baovao mahaleotena : fampitahorana, fisamborana ary fidarohana.
Monina ao Bishkek i Olga, 33 taona, rehefa nandao an'i Tiorkmenistan tamin'ny taona 2001. Miasa amin'ny maha-mpamakafaka ara-politika azy ao amin'ny ivontoeram-panabeazana iray izy amin'izao fotoana izao ary manoratra tsindraindray momba ny toe-draharaha ara-zon'olombelona, fanabeazana, olana ara-tsolika sy etona fandrehitra ao Tiorkmenistan.
Fony izy mbola mpianatra no nandehanan'i Olga voalohany indrindra tao Kyrghyzistan. “nandany ny taonako voalohany manontolo nidirana tao amin'ny Oniversite Amerikana Azia Afovoany tao Bishkek tao amin'ny tranomboky aho. Novakiako daholo izay boky rehetra tao, fahafinaretana ho ahy tokoa izany fotoana izany” hoy izy nanazava nandritra ny antsafa nifanaovany tamin'i EurasiaNet.org, nifanaovana ao anaty solonanarana araka ny fangatahany.
Fotoana matroka eo amin'ny lafiny fanovozam-pianarana ny taona antenantenan'ny 2000s tao Tiorkmenistan. Tamin'ny febroary 2005, nametraka didy hitsivolana ny filoha Saparmurat Niyazov efa nodimandry fa tsy misy ilàna azy ny tranomboky any amin'ny faritany satria efa tsy mahay mamaky teny rahateo ny mponina ambanivohitra. Taorian'izany, nodidian'i Niyazov ny hanakatonana ny tranomboky rehetra ankoatra ireo efa goavana vitsy sy ny tranomboky ho an'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony.
Noho io fanapahan-kevitra io sy ireo politika hafa nentina hanokana-monina tanteraka an'i Tiorkmenistan, dia fantatr'i Olga kely ny fahafahamisafidy miandry azy raha mijanona ao amin'ny firenena izy. Mitantara izy : “Nijanona tao Kyrghyzistan aho satria sarotra ny mahita asa [miohatra amin'ny fianarana norantoviko] tao Tiorkmenistan”, manampy trotraka izany ny tsy fahaizako teny hafa tsy Tiorkmenina. “Ny orinasa mifandraika amin'ny solika sy ny etona voajanahary, izay niroborobo tamin'izany fotoana izany, no safidy tsotra indrindra, saingy nitady asa mitodika amin'ny fampandrosoana ara-piarahamonina kokoa aho.”
Raha nanontaniana amin'ny mety hiverenany any Tiorkmenistan i Olga dia nolazainy fa aleo tsy eritreretina ny amin'izany fa aleo aloha mifantoka amin'ny fianarana sy ny zananilahy enintaona. Sarotra ampiarahana ny fahatsapana fahalalahana niainany tao Kyrghyzistan ny ny famoretana ankapobe mihatra ao Tiorkmenistan.
handravahana ny fahasarotam-piainana ao amin'ny firenena, notsiahivin'i Olga ny revolisiona kyrghyze tamin'ny taona 2005 ; raha mbola mpianatra tao amin'ny Oniversite Amerikana ao Azia Afovoany i Olga dia naharay antso avy amin'ny sampam-pitsikilovana ny ray aman-dreniny. Nolazainy ary fa “liana ireo [mpiasan'ny fitsikilovana] raha mandray anjara amin'ny revolisiona aho.”
Mongolia 8 ora izay